नेपाल ल्याइएको विश्वकप क्रिकेटको ट्रफी कहाँ-कहाँ प्रदर्शन गरिँदैछ ?::Hamrodamak.com
नेपाल ल्याइएको विश्वकप क्रिकेटको ट्रफी कहाँ-कहाँ प्रदर्शन गरिँदैछ ?
विश्वकप ट्रफी नेपालसहित २१ देशका ६० शहरमा प्रदर्शन गरिने आइसिसीले जनाएको छ।
काठमाडौं । इङ्ग्ल्याण्ड र वेल्समा सन् २०१९ को मे ३० देखि १४ जुलाइसम्म आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आइसिसी) विश्वकप क्रिकेटको ट्रफी अपराह्न नेपाल ल्याइएको छ।
आइसिसीका नेपाल प्रतिनिधि एवं क्यानका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत भावना घिमिरेका अनुसार विश्वकप ट्रफी आज युएइबाट अपराह्न ३ः४० बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आइ पुगेको हो। ट्रफी लिएर आइसिसीको एक प्रतिनिधिमण्डल काठमाडौँ आइपुगेको छ। सो ट्रफी नेपालमा सोमबारसम्म रहनेछ। नेपालमा रहँदा ट्रफीलाई स्वयम्भू, पोखरा र चन्द्रागिरि हुँदै वसन्तपुर पुर्‍याउने कार्यक्रम छ।
घिमिरेका अनुसार, शुक्रबार अपराह्न ट्रफी नेपाल ल्याइए लगत्तै स्वयम्भू लगिएको छ। स्वयम्भूमा केही घण्टा प्रदर्शनीमा राख्ने र शनिबार बिहानै पोखरा क्रिकेट रङ्गशाला लगिनेछ। पोखरा प्रिमियर लिग (पिपिएल) का लागि सबै खेलाडी र क्रिकेट सम्बद्ध व्यक्ति पोखरामा रहेकाले ट्रफी पोखरा लैजान लागिएको हो।
‘ट्रफी टुरको मुख्य उद्देश्य क्रिकेटको क्रेज बढाउनु र पर्यटन प्रवर्धन गर्नु हो’ घिमिरेले भनिन्, ‘पोखरा रङ्गशालाका साथै फेवाताल र सराङकोटसम्म पुर्‍याउने तालिका छ, समयले भ्याएसम्म रुपा ताल र बेगनासतालसम्म ट्रफी लगिनेछ।’
सो ट्रफी शनिबार बेलुकी पोखराबाट पुनःकाठमाडौँ ल्याइनेछ। त्यस्तै २८ कार्तिकमा ट्रफीलाई काठमाडौँको ऐतिहासिक स्थान चन्द्रागिरि लगिनेछ। चन्द्रागिरिमा लगेर केही घण्टा त्यहाँ प्रदर्शनीमा राखिने र सो प्रदर्शनी कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीलाई तस्बीर खिच्न दिइने घिमिरेले जानकारी दिए।
सोही दिन चन्द्रागिरिबाट ट्रफी काठमाडौँको वसन्तपुर दरबार क्षेत्रमा लगेर राखिनेछ। त्यहाँ क्रिकेट समर्थक र सर्वसाधारणलाई ट्रफीसँग तस्बीर खिच्न दिने कार्यक्रम छ। आइसिसीले विश्व भ्रमणको दौरान विश्वकप ट्रफी नेपालमा समेत प्रदर्शन गर्न लागेको हो। नेपालले एक दिवसीय मान्यता पाएको अवसरमा ट्रफीलाई नेपाल ल्याउन लागिएको घिमिरेले बताइन्।
विश्वकपको ट्रफी निशान कम्पनीको सहयोगमा विश्वभर प्रदर्शन गरिएको हो। क्रिकेटको विश्वकप ट्रफी नेपालमा पहिलो पटक ल्याइएको हो। फुटबलको ट्रफी भने नेपालमा ल्याइसकिएको छ। एक सय दिने विश्व भ्रमणमा रहेको विश्वकप ट्रफी ओमान, अमेरिका, वेष्टइण्डिज, श्रीलङ्का, पाकिस्तान र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएइ) हुँदै नेपाल ल्याइएको हो।
ट्रफी नेपालबाट भारत, न्यूजील्याण्ड, अष्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रिका, केन्या, रुवान्डा, नाइजेरिया, फ्रान्स, बेल्जियम, नेदरल्याण्ड्स र जर्मनी हुँदै इङ्ग्ल्याण्ड लगिनेछ। विश्वकप ट्रफी नेपालसहित २१ देशका ६० शहरमा प्रदर्शन गरिने आइसिसीले जनाएको छ।